အရပ်ဝတ်ဖြင့်အသွင်ယူကာ ဖမ်းဆီးရန်သွားသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဓားဖြင့်ရန်ပြုသူများအား သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး | Akonthi
အရပ်ဝတ်ဖြင့်အသွင်ယူကာ ဖမ်းဆီးရန်သွားသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဓားဖြင့်ရန်ပြုသူများအား သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်တွင် အရပ်ဝတ်ဖြင့် အသွင်ယူပြီး ဆိုင်ကယ်စီးကာ ညအချိန် ရမ်းကားနေသည့် ဒုစရိုက်သမားများကို စုံစမ်းဖမ်းဆီးသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အမျိုးသား ၇ ဦးမှ ဓားများကိုင်ဆောင်၍ ပြန်လည်ခုခံခဲ့ သော ကြောင့် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ၅ ဦးဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့၊ တိုင်းမှုခင်း အကူဌာနစိတ်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် သက်သေများနှင့်အတူ မေလ ၉ ရက်၊ ည ၁၀ နာရီခန့်က မှုခင်းကျဆင်းရေး စီမံချက်ဆောင်ရွက်နေရာမှ အရပ်ဝတ်ဖြင့် အသွင်ယူပြီး ဆိုင်ကယ်နှင့် ဒုစရိုက်သမားများအား စုံစမ်းဖမ်းဆီးရန် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ ၇၄ လမ်းနှင့် ၇၃ လမ်းကြား၊ မင်္ဂလာလမ်း အတိုင်း အနောက်မှအရှေ့သို့ မောင်းနှင် လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့မောင်းနှင်လာစဉ် မင်္ဂလာလမ်းအတိုင်း မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ ၅၄ယ/….၊ ဟွန်ဒါကလစ် အနက်ရောင်ဆိုင် ကယ်အား ရော်ဂဲ မောင်းနှင်ပြီး ကိုမောင်နှင့် ရဲလေးတို့မှ ဓားရှည်ကိုင်လျှက်နှင့်လည်းကောင်း၊ ကန်ဘိုစီဇက်အိုင် ခဲ/နက်ရောင်ဆိုင်ကယ်အား မျိုးမင်းသူမှ မောင်းနှင်ပြီး သားမွန်စိုးမှ ဓားရှည်ကိုင်လျှက်နှင့်လည်းကောင်း၊ ၄၂/…. ခဲ/နက်ရောင် စူပါအမ်ဘို စီဇက်အိုင် ၁၂၅ ဆိုင်ကယ်အား ဘိုဟိန်းကျော်(ခ)ဘိုဘို မောင်းနှင်ပြီး မြင့်နိုင်(ခ)ဆံ ရှည်မှ ဓားရှည်ကိုင်လျှက်နှင့်လည်းကောင်း စုစုပေါင်း ဆိုင် ကယ် ၃ စီးအား တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
အဆိုပါ ဆိုင်ကယ်များအား ရပ်ရန်ပြောစဉ် မရပ်ဘဲမောင်းနှင်ထွက်ပြေးရာ ၎င်းတို့ ဆိုင်ကယ်အချင်းချင်း ချိတ်မိပြီး လဲသွားသဖြင့် ဘိုဟိန်းကျော်(ခ)ဘိုဘို၊ မြင့်နိုင်၊ မိုးမင်းသူ၊ သာမွန်စိုး(ခ)မွန်ထီး၊ ကိုမောင်၊ ရော်ဂဲ၊ ရဲလေးတို့ ၇ ဦးမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဓားများ ကိုင်၍ ခုတ်ရန်ပြေးလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ ပြေးလာစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဓားများအား အောက်သို့ချရန် အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ဓားရှည် များ မချဘဲ ခုတ်ရန်ပြေးဝင်လာသည့်အတွက် သေနတ်ဖြင့် ၁ ချက်ခြောက်လှန့်ပစ်ခဲ့ရာ ၎င်းတို့စီးနင်းလာသော ဆိုင်ကယ်များ ထားခဲ့ပြီး ဓားများကိုင်ဆောင်ကာ ထွက်ပြေးသွား၍ လိုက်လံဖမ်းဆီးစဉ် ကိုမောင်၊ ဘိုဟိန်းကျော်(ခ)ဘိုဘို၊ မြင့်နိုင်၊ မိုးမင်းသူ၊ သားမွန်စိုး(ခ)မွန်ထီးတို့ ၅ ဦးကို ဓားရှည်များနှင့် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကိုမောင်၊ ဘိုဟိန်းကျော်(ခ)ဘိုဘို၊ မြင့်နိုင်၊ မိုးမင်းသူ၊ သားမွန်စိုး(ခ)မွန်ထီးတို့ ၅ ဦး ကို ပြည်ကြီးတံ ခွန်မြို့မရဲစခန်း၌ (ပ)၄၉၁/၂၀၁၉၊ လက်နက်ပုဒ်မ ၁၉(င) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ တာဝန်ဝတ္တရား ထမ်းဆောင်နေသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များဖြစ်ကြောင်း သိပါလျှက်နှင့် တာဝန်တ္တရား ထမ်းဆောင်မရအောင် ဟန့်တားနှောက်ယှက်သဖြင့် (ပ)၄၉၂/၂၀၁၉၊ ရာဇသတ် ကြီးပုဒ်မ- ၃၅၃/၁၁၄ ဖြင့်လည်းကောင်း အသီးသီး အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
- နိုင်မင်းလွင်(အကုန်သိ သတင်းဌာန) | ဓာတ်ပုံ-Mandalay Police
အရပျဝတျဖွငျ့အသှငျယူကာ ဖမျးဆီးရနျသှားသညျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားကို ဓားဖွငျ့ရနျပွုသူမြားအား သနေတျဖွငျ့ ပဈခတျဖမျးဆီး
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး ပွညျကွီးတံခှနျမွို့နယျတှငျ အရပျဝတျဖွငျ့ အသှငျယူပွီး ဆိုငျကယျစီးကာ ညအခြိနျ ရမျးကားနသေညျ့ ဒုစရိုကျသမားမြားကို စုံစမျးဖမျးဆီးသညျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားအား အမြိုးသား ၇ ဦးမှ ဓားမြားကိုငျဆောငျ၍ ပွနျလညျခုခံခဲ့ သော ကွောငျ့ သနေတျဖွငျ့ ပဈခတျဖမျးဆီးခဲ့ရာ ၅ ဦးဖမျးမိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး ရဲတပျဖှဲ့၊ တိုငျးမှုခငျး အကူဌာနစိတျမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြားသညျ သကျသမြေားနှငျ့အတူ မလေ ၉ ရကျ၊ ည ၁၀ နာရီခနျ့က မှုခငျးကဆြငျးရေး စီမံခကျြဆောငျရှကျနရောမှ အရပျဝတျဖွငျ့ အသှငျယူပွီး ဆိုငျကယျနှငျ့ ဒုစရိုကျသမားမြားအား စုံစမျးဖမျးဆီးရနျ ပွညျကွီးတံခှနျမွို့နယျ၊ ၇၄ လမျးနှငျ့ ၇၃ လမျးကွား၊ မင်ျဂလာလမျး အတိုငျး အနောကျမှအရှသေို့ မောငျးနှငျ လာခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ထိုသို့မောငျးနှငျလာစဉျ မင်ျဂလာလမျးအတိုငျး မကျြနှာခငျြးဆိုငျမှ ၅၄ယ/….၊ ဟှနျဒါကလဈ အနကျရောငျဆိုငျ ကယျအား ရျောဂဲ မောငျးနှငျပွီး ကိုမောငျနှငျ့ ရဲလေးတို့မှ ဓားရှညျကိုငျလြှကျနှငျ့လညျးကောငျး၊ ကနျဘိုစီဇကျအိုငျ ခဲ/နကျရောငျဆိုငျကယျအား မြိုးမငျးသူမှ မောငျးနှငျပွီး သားမှနျစိုးမှ ဓားရှညျကိုငျလြှကျနှငျ့လညျးကောငျး၊ ၄၂/…. ခဲ/နကျရောငျ စူပါအမျဘို စီဇကျအိုငျ ၁၂၅ ဆိုငျကယျအား ဘိုဟိနျးကြျော(ခ)ဘိုဘို မောငျးနှငျပွီး မွငျ့နိုငျ(ခ)ဆံ ရှညျမှ ဓားရှညျကိုငျလြှကျနှငျ့လညျးကောငျး စုစုပေါငျး ဆိုငျ ကယျ ၃ စီးအား တှရှေိ့ခဲ့ကွောငျး ရဲတပျဖှဲ့၏ ထုတျပွနျခကျြအရ သိရသညျ။
အဆိုပါ ဆိုငျကယျမြားအား ရပျရနျပွောစဉျ မရပျဘဲမောငျးနှငျထှကျပွေးရာ ၎င်းငျးတို့ ဆိုငျကယျအခငျြးခငျြး ခြိတျမိပွီး လဲသှားသဖွငျ့ ဘိုဟိနျးကြျော(ခ)ဘိုဘို၊ မွငျ့နိုငျ၊ မိုးမငျးသူ၊ သာမှနျစိုး(ခ)မှနျထီး၊ ကိုမောငျ၊ ရျောဂဲ၊ ရဲလေးတို့ ၇ ဦးမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြားအား ဓားမြား ကိုငျ၍ ခုတျရနျပွေးလာခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ယငျးသို့ ပွေးလာစဉျ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားဖွဈကွောငျးနှငျ့ ဓားမြားအား အောကျသို့ခရြနျ အကွိမျကွိမျပွောဆိုခဲ့သျောလညျး ဓားရှညျ မြား မခဘြဲ ခုတျရနျပွေးဝငျလာသညျ့အတှကျ သနေတျဖွငျ့ ၁ ခကျြခွောကျလှနျ့ပဈခဲ့ရာ ၎င်းငျးတို့စီးနငျးလာသော ဆိုငျကယျမြား ထားခဲ့ပွီး ဓားမြားကိုငျဆောငျကာ ထှကျပွေးသှား၍ လိုကျလံဖမျးဆီးစဉျ ကိုမောငျ၊ ဘိုဟိနျးကြျော(ခ)ဘိုဘို၊ မွငျ့နိုငျ၊ မိုးမငျးသူ၊ သားမှနျစိုး(ခ)မှနျထီးတို့ ၅ ဦးကို ဓားရှညျမြားနှငျ့ ဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ယငျးဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ ကိုမောငျ၊ ဘိုဟိနျးကြျော(ခ)ဘိုဘို၊ မွငျ့နိုငျ၊ မိုးမငျးသူ၊ သားမှနျစိုး(ခ)မှနျထီးတို့ ၅ ဦး ကို ပွညျကွီးတံ ခှနျမွို့မရဲစခနျး၌ (ပ)၄၉၁/၂၀၁၉၊ လကျနကျပုဒျမ ၁၉(င) ဖွငျ့လညျးကောငျး၊ တာဝနျဝတ်တရား ထမျးဆောငျနသေော ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ မြားဖွဈကွောငျး သိပါလြှကျနှငျ့ တာဝနျတ်တရား ထမျးဆောငျမရအောငျ ဟနျ့တားနှောကျယှကျသဖွငျ့ (ပ)၄၉၂/၂၀၁၉၊ ရာဇသတျ ကွီးပုဒျမ- ၃၅၃/၁၁၄ ဖွငျ့လညျးကောငျး အသီးသီး အမှုဖှငျ့စဈဆေးနကွေောငျး သိရသညျ။
- နိုငျမငျးလှငျ(အကုနျသိ သတငျးဌာန) | ဓာတျပုံ-Mandalay Police